Farriin ku Socoto Ganacsatada Soomaaliyeed
By ibrahim Aden shire November 27, 2017
Muddadii ku dhaweyd sodonka sano ee dalkeennu burburku ka jiray, gacansatadu waxay soo jiiteen eedaymo badan iyo ammaanba. In badan waxaa lagu eedeeyay inaysan u aaba yeelin waxay ka ganacsadaan. Waxaa lagu duray inay lacag badan ka sameeyaan beecsharada hubka dadku isku gumaaday, inay dalka keenaan dawo iyo raashin dhacay, keenidda iyo suuq-galinta lacagaha faalsada ah iyo kuwo kale oo aan tiro lahayn sida inay ka macaashaan dowlad la’aanta.
Laakiin wax walba oo laga sheego waxaan la inkiri karin kaalinti ay ganacsatadu lahayd baadbaadinta dalka iyo dadka. Intii lagu jiray dowlad la’aanta, ganacsatada ayaa dalka dowlad ka ahayd: iyaga ayaa bixinayay adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka lacagba ha ku qaataane, iyaga ayaa keenayay dhammaan wixii daruuriyaad ah ee loo baahna. Sidoo kale waxay ahaayeen dadka kaliya ee uusan xaddidin colaadihii umulo dooxa ahaa ee dalka ka socday sanadihii hore ee dagaalka sokeeyo. Ganacsiga iyo ganacsatadu waa socdeen iyadoo dhiiggu qummayo. Sidaa darteed anigu waxaan qabaa in ganacsatadu qabatay shaqo muhiim ah hadana laga rabo mid kasii badan.
Walaalka ganacsadaha ahow farriinta aan kuu wado ayaa ah inaad maal galisaan waxbarashada dalka. Waxaad kasoo gudubteen wajigii hore ee ganacsiga kasoo ku dhisnaa nidaam la’aan, waxaana la joogaa waqtigii aad hanan lahaydeen ganacsi rasmi oo nidaam iyo manhaj leh. Taasi inaad heshaan waxaad u baahantihiin shaqaale aqoon iyo xirfad leh. Heliddda shaqaale caynkaas ahna waxay u baahantahay jaamacado soo saaro oo tayo leh. Taas ayaa ka dhigayso lama huraan inaad maal galisaan waxbarashada sare maadaama aysan dowladdu aysan lahayn awood dhaqaale oo ay ku taageerto waxbarashada sare iyo tan hoosaba. U maalgaliya si aad ooga faaiidaan, dalku uga faaiido dadkuna uga faaiido. U maalgaliya jiritaanka iyo horumarinta ganacsigiinna.
Walaalka ganacsadaha ahow waxaa la joogaa waqtigii uu ganacsigiinu noqon lahaa mid hal-abuur leh oo aqoon ku dhisan. Si taasi loo helo waa inaad maalgalisaan cilmi-baaris jihooyin badan oo ku saabsan sida ganacsigiinnu ugu gudbi lahaa mid heer qaran ah ama caalami oo dalka iyo adinkuba aad kaa fiiddaan. Maalgalinta cilmi-baaris ayaa dhiiri galin borofeesrada dalka joogo ee inay cashar bixiyaan mooyee aan fursad u helin si kale oo ay aqoontooda u isticmaalaan. Waxaan qirayaa in ay aad u hoosayso xirfadda ay borofeesaradu u leeyihiin qaadidda cilmi-baaris tayo leh balse waxaan hubaa inay jiraan kuwo badan oo ku filan midda aasaasiga ah ee uu hadda u baahanyahay ganacsigiinnu sida baaritaanka la xiriiro suuq-geynta, aragtida macaamiisha iyo saamaynta uu ku yeelan karo ganacsigiinnu dadka iyo bay’ada.
Shirkadaha waaweyn waxaa ay samayn karaan inay xariir shaqo la wadaagaan hal ama dhowr jaamacadood. Wada shaqayntaan ayaa suura galin in ardayda wali wax dhiganayso ka shaqo billaabaan shirkadahaas si ay ficil ahaan ugu sameeyaan wax yaabaha ay baranayaan. Arrintaas kaliya sare u qaadi mayso aqoonta ardayga ee sidoo kale waxay shirkadda fursad u siinaysaa inay xushaan kuwa kartida iyo aragtida fog leh. Jaamacadda waxay ka caawin inay hesho sumcad iyo qarash lagu tayeeyo maadooyinka ay bixiso. Borofeesarraduna waxay ka faaiidi inay helaan qarashka ay ugu baahan yihiin inay cilmi-baaris sameeyaan taasoo sumcaddooda iyo aqoontoodada sare qaadayso.
Walaalka ganacsadaha ahow ma ogtahay in shirkadaha adduunku ugu yaraan rubuc ka mid ah, haddaysan kala bar ahayn, faaiidada ay helaan ay ku bixiyaan cilmi-baaris la xariito danaha ganacsigooda. Maahana kuwa waaweyn kaliya ee xataa kuwa yaryar waa sidaas. Marka loogu baahi badanyahay cilmibaaristu waa inta ay shirkaddu curdanka tahay. Tusaale, huawei company, oo ah shirkad shiine laga leeyahay waa dhawna la askumay, waxay ku bixin jirtay 50% faaiidada ay hesho cilmi-baaris iyo hormarin marki ay bilowga ahayd. Maanta waxay tartan kula jirtaa shirkadaha ugu waaweyn dunida sida Samsung iyo Apple iyadoo labo sano ka hor moobillada ay soo saarto loo arkayay boonbale ay caruurtu ku cayaarto. Waxa keenay inay dadgdagaas u korto waa qarashka ay u ogalaatay horumarinta ganacsigeeda.
Waxaa laga yaabaa in ganacsatada yaryar u arkaan in hadalkaan ku socdo shirkadaha waaweyn kaliya. Maya ee inkasta oo uu ganacsigaadu la ekyahay waad u baahantahay inaad qarash oogu talo gasho baaritaan fursado iyo fikrado cusub. Haddii ay, tusaale ahaa, Dahabshiil hiigsanayso galidda suuqyada caalamiga ah, adigu waxaad hiigsanaysaa galidda suuqa qaranka sidaa darteed mid walba tabartiisa ayuu la ekyahay yoolkiisu.
Walaalka ganacsadaha ahow, ma ogtahay in waxbarashda lafteedu ay tahay suuq dihin oo oo lacag badan laga samayn karo? Ma ogtahay inaad maalgalin kartaa madbacado daabaco buugaag aad ka ganacsataan? Ma ogtahay in baahi weyn loo qabo buugaagta cilmiga ah ee afafka kala duwan ku qoran mase ogtahay in keeniddoodu faaiido u tahay kobcinta aqoonta dadkeenna? Ma ogtahay in haddii dadku waxbarto ganacsigaada ballaaran doono. Ka sakow inaad hesho shaqaale xirfad leh, waxaad heli dad shaqeeyo oo wax iibsan karo taasoo macaamiil cusub u abuuri doonto ganacsigaada.
Walaalka ganacsadaha ahow, maaanta waxaan haysanna fursad qaali ah oo ay yartahay dal haysto taasoo ah suuq dihin iyo shaqaale jaban oo dhalin yaro ah. Laakiin in labadaan laga faaidaysto waxay u baahantahay maal-galin lagu sameeyo waxbarashada aasaasiga ah iyo midda sare. Sidaas awgeed mid walba oo idinka mid ah, intuu rababa ha la ekaado ganacsigiisee, ha ku talo galo gacan qabashada waxbarashada dalka mid hoose iyo saraba. Ka fekera mustaqbalka fog ee ganacsigiinna. Hiigsada meel sare cindigana galiya in ganacsigiinnu gaaro adduunka dacalladiisa. Hanka ganacsigiinna oo sarreeyo wuxuu dan u yahay dhammaan dadka soomaaliyeed. ugu danbayn, ogaada in maanta 70% badbaadinta dhalinta soomaaliyeed gacantiinna ay ku jirto meesha aad adingu dhigtaanna ay tagi doonaan.